विश्वकप क्रिकेट : आयोजक इंग्ल्यान्ड र वेष्ट इन्डिजको भिडन्त आज, कस्को पडला भारी ? – Nepal Trending
विश्वकप क्रिकेट : आयोजक इंग्ल्यान्ड र वेष्ट इन्डिजको भिडन्त आज, कस्को पडला भारी ?
On ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १२:२१
एजेन्सी । इंग्ल्याण्डमा जारी विश्वकपमा आज आयोजक इंग्ल्यान्डले वेष्ट इन्डिजविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । उक्त खेल साउथह्याम्पटनस्थित रोज बल रंगशालामा नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३:१५ बजे सुरु हुनेछ।
यस विश्वकपमा बर्षाले अहिलेसम्म चार खेल रद्ध भएको अवस्थामा यो खेलमा पनि वर्षाले प्रभाव आंशिक रुपमा पार्ने बताइएको छ । हल्का बर्षा हुने अनुमान भएपनि पुरै खेल भने रद्ध हुने सम्भावना नरहेको बताइएको छ ।
वेष्ट इन्डिजले पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो । तर दोस्रो खेलमा भने अष्ट्रेलियासँग १५ रनले हारेको थियो । वेष्ट इन्डिजको तेस्रो खेलमा भने वर्षा बाधक बन्यो ।
यता, पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई १०४ रनको फराकिलो जित निकालेको इंग्ल्यान्ड दोस्रो खेलमा भने पाकिस्तानसँग नराम्ररी पछारिएको थियो । पाकिस्तानसँग १४ रनले पराजित भएको इंग्ल्यान्ड तेस्रो खेलमा भने बंगलादेशलाई १०६ रनले पराजित गर्न सफल भयो ।